Xulka Dalkeena Soomaaliya oo maanta Ciyaaraya Final-ka Koobka CECAFA U-17 & Madaxda kasoo qeyb galeeysa
Wednesday, March 20th, 2019 - 16:10:24
Sunday April 29, 2018 - 10:35:35 in Wararka by
Xulka 17-jirrada Soomaaliya ayaa maanta waxay Ciyaari doonaan Finalka Koobka Bariga iyo Bartamaha Afrika ee xiddigaha la da’da eg 17-ka Sano, kaasoo ka dhacaya Sanadkan magaalada Bujumbura ee Xarunta Dalka Burundi.
Kulanka Kama Dambeysta ah waxaa isugu soo haray xulalka Qaranka Soomaaliya iyo Tanzania, iyadoo ciyaarta xiisaha Badan ay dhici doonto Galabta waqtiga Casirka ah.
Labada Xul ayaa waxay kasoo kala Baxeen Guruubyada A iyo B oo tartankan loo qabtay, Somalia Kulankeedii Koobaad waxay ku dhacday kooxda Qaranka Itoobiya ciyaaraha Guruubka, markaas Itoobiya waxay garoonka soo gelisay xiddigo ka weyn kuwa sharcigu oggolyahay Da’ ahaan, taasoo keentay in dhammaan la baabi’iyo Goolal 3-1 ahaa oo ay Itoobiya ku badisay, sidoo kalena Somalia lagu siiyay 3 dhibcood iyo 3 gool oo Nadiif ah.
Ciyaartii Labaad xulka Martigelinaya koobka ee Burundi iyo Somalia ayaa ku kala Baxay 0-0, kulankii Seddaxaad ee Guruubkana, Somalia ayaa 1-0 uga badisay xulka Kenya, intaas keddib Somalia Semi-finalka koobka ayaa lagu aaddiyay Uganda oo ay haddana uga gudbeen 1-0 Dabayaaqada Usbuucii hore.
Xulka Somalia maanta ciyaartooda waxaa la filayaa in Garoonka ay ka daawadaan, Madax ka socota dowladda Federalka ah, Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed iyo Xubno kale oo Gaaray Bujumbura.
Thaabit ayaa Bartiisa Twitter ku qoray: "Waxan nabad imid Bujumbura si aan moralka ugu dhiso cayaartoydena 17jirada. Maanta si Toos ah ayaan ugala qeybqadanaya cayaarta finalka. Waxan dhaman ugu baaqayaa iney niyada u dhisaan wiilasheena, qofkii imaan kara inuu Yimaado, wey naga mudanyihiin Ciso iyo Sharaf ayeyna Calanka usoo Hooyeen”